HUAWEI nova 7SE ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်က ဘာဖြစ်မလဲ? - Myanmar Tech News
Homepage / Tech News / HUAWEI nova 7SE ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?
By adminPosted on August 24, 2020 September 5, 2020
HUAWEI အနေနဲ့ အရည်သွေးမြင့် ထုတ်ကုန်တွေ မိတ်ဆက်နေတာ စာဖတ်သူတွေ သိထားပြီးတဲ့အတိုင်း ဒီတခါ ဖော်ပြချင်တာ Mid-range တန်းက HUAWEI nova7မော်ဒယ်အသစ် အကြောင်းပါ။
2020 ဒုတိယ နှစ်ဝက်ကာလဆိုတာ တနည်းပြောရရင် Budget နဲ့ High-end ဖုန်းတွေထက် အလယ်လတ်တန်း မော်ဒယ်တွေ မိတ်ဆက်ကြတဲ့ အချိန်ပါ။ nova 7SE ထွက်ရှိခဲ့တာ လအနည်းငယ် ကြာမြင့်သွားပြီ ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဆီကို ကနေ့မှ မိတ်ဆက်သွားတယ်။
ဒီဖုန်းဟာ Mid-range Level အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာပေမယ့် Flagship စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ လုပ်ဆာင်ချက် တချို့ ပါဝင်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုတော့ ထူးခြားချက်တွေ လေ့လာရင်း စလိုက်ရအောင်။
An OLD nova Design
ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ Characteristic ကို Design နဲ့ပဲ ဖော်ပြတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း HUAWEI nova 7SE ကို မြင်တွေ့ရမယ့် ပုံစံဟာ ခါတိုင်း nova စီးရီးတွေနဲ့ အရမ်းကြီးတော့ ကွာမနေပါဘူး။
Gradient Design ကို Signature အဖြစ် သုံးထားဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် nova ဖုန်းသစ်ကို ခါတိုင်းနဲ့ မတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သုံးစွဲရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ HUAWEI က Redefined 3D Glass Surface လို့ ပြောဆိုထားလို့ စမတ်ဖုန်း ထွက်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုနေမလဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။
7SE ကို ကြည့်လိုက်ရင် သာမန် စမတ်ဖုန်း Display အသုံးပြုထားတယ်လို့ မြင်ရပေမယ့် HUAWEI အနေနဲ့ အားစိုက်ထားတာမျိုး ရှိပါတယ်။
Punch-hole Notch ပါဝင်တာ nova စီးရီးအတွက် မဆန်းတော့ပေမယ့် သေးသွယ်တဲ့ Bezel တွေက ဖုန်းကို ပိုဆွဲဆောင်မှု ရှိစေတယ်။
6.5” ပုံဖော် မျက်နှာပြင်မှာ 1,080 x 2,400p Resolution တပ်ဆင်ပေးထားတာ High Definition သုံးလိုသူအတွက် အဆင်ပြေသလို 90.3% ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Screen-to-body Ratio က ကောင်းမွန်တဲ့ Viewing Experience ပေးစွမ်းဦးမှာပါ။
ဒါ့အပြင် nova 7SE Display ဟာ HDR Content တွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး 96% NTSC Colour Gamut ထောက်ပံ့ထားပါသေးတယ်။
A.I Powered Kirin Chipset
HUAWEI စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာ A.I ပိုင်းပါ။ 7SE မှာ 7nm Process မှာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Kirin 820 SoC အသုံးပြုထားပြီး သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ 8GB RAM + 128GB Storage ကို Basic Option အနေနဲ့ ရရှိမှာပါ။
3D နဲ့ Graphics ပိုင်းအတွက် Mali-G57 နဲ့ အားဖြည့်ထားပြီး စမတ်ဖုန်းရဲ့ System Level လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ တွဲလိုက်ရင် ဂိမ်းကစားတဲ့အခါနဲ့ တခြား Graphics ပိုင်းဆိုင်ရာ Application တွေမှာ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
သို့ပေမယ့် ဒီလို စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းနေဖို့ EMUI 10 (Upgradable) လိုအပ်သလို တဖက်တလှမ်းကနေ A.I နဲ့ ထောက်ပံ့ဖို့ သီးသန့် NPU (Neural Processing Unit) နဲ့ Fortified လုပ်ထားပါသေးတယ်။
Quad Camera with A.I Benefits
HUAWEI nova 7SE မှာ Highlight လုပ်ပြစရာ နောက်တချက်က Camera ပိုင်း အားစိုက်ထားတဲ့ အချက်တွေပါ။ ကျောဖက်မှာ ကင်မရာ (၄) လုံး ပါဝင်တဲ့အတိုင်း အဆိုပါ Sensor တွေဟာ AIS (HUAWEI AI Image Stabilisation) ထောက်ပံ့သလို ဗီဒီယိုအပိုင်းမှာ 4K@60fps ၊ 720p@960fps နဲ့ Dual-video အစရှိတဲ့ Feature တွေ ပါဝင်ပေးထားပါတယ်။
Primary 64MP Sensor ကလည်း အနှစ်ကျတဲ့ 1/1.7” CMOS Sensor တပ်ဆင်ထားသလို Aperture f/1.8 ရှိတဲ့အတွက် HUAWEI ဆိုသလို Razer Sharp ပုံရိပ်တွေ ဖန်တီးနိုင်မယ်။
Cameras Quick Specification
Primary 64MP f/1.8
Ultra-wide 8MP f/2.4
Depth Sensor 2MP f/2.4
Macro Lens 2MP f/2.4
Selfie 16MP f/2.0
2MP Sensor နှစ်မျိုးက Portrait Effect နဲ့ Macro Shot ရိုက်ကူးတဲ့အခါ ကူညီမှာဖြစ်ပြီး Mid-range ဖုန်းတလုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ Ultra-wide Lens ကို 8MP f/2.4 အဖြစ် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
လက်ရှိ အနေထားအရ ဆိုရင် 7SE မှာ ကင်မရာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ နှစ်သက်စရာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုမယ့် Review လုပ်ပြီးမှ ပိုပြောကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
Kirin 820 ဟာ 5G ထောက်ပံ့တဲ့ Chipset ဖြစ်တာနဲ့အညီ မြန်ဆန်တဲ့ Connection ကို ခံစားရမယ် (ဒါမယ့် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ 5G မရသေးဘူး) အဆိုပါ Kirin Chipset ဟာ 5G Modem ကို Embed လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ သီးသန့် ပါဝင်တဲ့အတွက် HUAWEI အဆိုရ ပါဝါသုံးစွဲမှုကို ချွေတာပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖုန်းကို အကြာကြီး အားသွင်းရတာမျိုး ၊ ကိစ္စရှိလို့ ပြင်ဆင်တဲ့အခါ နှေးကွေးတဲ့ Charging Rate/Speed ကြောင့် nova 7SE က စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တောင့်တင်းတဲ့ Battery အပြင် 40W Fast Charging စနစ် ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် နာရီဝက်အတွင်း 70% အားပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်မယ်။
HMS & HUAWEI Apps Gallery
Nova ဖုန်းသစ်မှာလည်း Google Service မပါဝင်ပေမယ့် Application ပိုင်း သုံးစွဲရ လွယ်ကူအောင် HUAWEI Mobile Services နဲ့ App Gallery တို့ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ Service တွေကတဆင့် နှစ်သက်ရာ Apps တွေကို 3rd Party ကဖြစ်စေ ၊ တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ Download ဆွဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရှာဖွေရ လွယ်ကူအောင် HUAWEI Petal Search Engine နဲ့လည်း ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
Pricing & Pre-order Bonus
nova 7SE အားပေးလိုသူတွေ အနေနဲ့ 499,000 ကျပ် လောက်တော့ ကြိတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတန်ဖိုးက မသေးလှပေမယ့် စမတ်ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် မဆိုးပေဘူး၊ သုံးပျော်တယ်။
ရရှိနိုင်မယ့် အရောင်တွေက Space Silver ၊ Crush Green နဲ့ Mid-summer Purple တို့ပါ။ Pre-order ကို သြဂုတ်လ (၂၈) ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး မှာယူနိုင်သလို HUAWEI Band4ကို Bonus အနေနဲ့ ရရှိမှာပါ။
ပြောဖို့ ကျန်သွားလို့၊ HUAWEI nova 7SE မှာ LTPS IPS LCD Panel သုံးထားတဲ့အတွက် In-display Fingerprint Sensor မပါဝင်ပါဘူး၊ အဲ့အစား Side-mounted Sensor ကို သုံးထားပါတယ်။ Battery ပိုင်းအနေနဲ့လည်း 4,000mAh Capacity သုံးစွဲပေးထားပြီး Typc-C Connector Port ပါဝင်ပါတယ်။
HUAWEI nova 7SE Homepage
Posted in Tech NewsTagged Huawei, nova 7SE, Tech News
Previous post Fall Guys မိုဘိုင်းဂိမ်း အဖြစ် မြင်ရဖို့ ပေါက်ကြားလာပြီ
Next post Galaxy Note20 Ultra မော်ဒယ်တချို့မှာ အပူတက်လွယ်တဲ့ ပြဿနာရှိနေတယ်